Thiha Lu Lin: April 2012
Posted by Thiha Lu Lin at 12:19 AM4comments
Posted by Thiha Lu Lin at 11:25 AM 1 comments
ငါ့မှာ အထီးကျန် ။
Posted by Thiha Lu Lin at 10:21 PM2comments
Posted by Thiha Lu Lin at 5:21 PM0comments
Posted by Thiha Lu Lin at 5:55 PM4comments
မျှော်ကိုးခြင်း မရှိတဲ့... အဆုံးမဲ့ချစ်ခြင်းရဲ့ နောက်မှာ
တိတ်တိတ်လေး လွမ်းဆဲ ပါ။
Posted by Thiha Lu Lin at 7:19 PM3comments
Posted by Thiha Lu Lin at 8:14 PM5comments
ဒီတစ်ပတ် တနင်္ဂနွေနေ့တော့ ဆရာကြီး ဦးဒယ်နီရယ် ရဲ့ဒေသနာတော်ကို ဝေငှပေးသွားချင်ပါတယ်။ ဆရာကြီး ရဲ့ဒီတစ်ပတ် ဒေသနာကတော့ ခါတိုင်းရက်သတ္တပတ်တွေကလို ရှည်ရှည်လျားလျား မရှိပေမယ့် တိုတိုနဲ့ထိထိမိမိ တင်ပြဝေငှသွားတာကို ခံစားဖတ်ရှုရမှာပါ။ ဒီ ဒေသနာတော်ကိုတော့ “ကောင်းသောအရာ တစ်စုံတစ်ခုမျှမလို” လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ကျွန်တော့ Blog လေးကနေ ပုံမှန် ဝေငှတင်ပြပေးနေတဲ့ ဆရာကြီးများရဲ့ဒေသနာတော်တွေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အသင်းတော်တွေနဲ့ဝေးကွာနေရတဲ့ ပြည်ပ နဲ့ ပြည်တွင်းက ယုံကြည်သူ ညီအစ်ကို မောင်နှမများနဲ့ မယုံကြည်သူ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်အောင် တင်ပြပေးနေတာပါ။ ဖတ်ကြားနာသူတိုင်း စိတ်ခွန်အားပြည့်စုံလို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ခံစားရပါစေ။ Amen!
ပိတောက်တွေက ဟိုလျှောက် ဒီလျှောက်နဲ့....
ရင်ထဲမှာတော့ ဥသြတွေ ငိုတယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 12:32 AM3comments
Posted by Thiha Lu Lin at 4:04 PM6comments
အပတ်စဉ် ဆရာကြီးများရဲ့ တရားဒေသနာတော်များကို မျှဝေပေးခွင့်ရတာ ခုဆိုရင် ငါးပတ်မြောက် ရှိလာပါပြီ။ အရမ်းလည်း ကြည်နူးကျေနပ်ပါတယ်။ ဖတ်ကြားနာသူတိုင်းလည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ဝိညာဉ်ခွန်အား ရရှိဆင်ခြင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို နေ့ ည မပြတ် ဆင်ခြင် အောက်မေ့ခြင်းဖြင့် မင်္ဂလာဖြစ်စေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတော် နဲ့ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာတော်တွေလည်း ရရှိခံစားကြရပါစေဗျာ။ ဒီတစ်ပတ်ကိုတော့ သိက္ခာတော်ရဆရာကြီး ဒေါက်တာ ဦးတင်မောင်ထွန်း ဝေငှခဲ့တဲ့ “အလိုတော်လမ်း၌ အသက်ရှင်ခြင်း” ဒေသနာတော်ကို မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်။ ဖတ်ကြားနာသူတိုင်းအား ဘုရားသခင် အသစ်သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ပေးပါစေ။ Amen!
Posted by Thiha Lu Lin at 9:00 AM2comments